50 Maalmood ayaa ka haray Koobka Africa - BBC Somali - Cayaaraha
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 1 December, 2012, 21:32 GMT 00:32 SGA
Bafana Bafana (‘Wiilasha, Wiilasha’) ee Koonfur Africa, waxay la cayaaraysaa kooxda ku cusub tartanka ee Cape Verde, kulan ka dhacaya garoonka City Stadium ee deegaanka Soweto, ka hor inta aysan la kulmin kooxda Angola, kadibna Morocco heerka Group-yada.
Shan iyo toban dal oo kale oo African ah, ayaa ku loolamaya tartanka 29-aad ee koobka Africa oo bilowday sanadkii 1957, markaas oo ay ku loolamayeen oo kaliya sadex wadan.
Koonfur Africa waxay ammaan badan ku heshay martigalintii koobta adduunka (FIFA World Cup), waa wadankii ugu horeeyay ee African ah oo cayaaraha adduunku ka dhacaan iyo dhismaha dhowr garoonka oo heer caalami ah.
Sagaal, ku dhow toban ayuu ku abaalmariyay guddoomiyaha Fifa Sepp Blatter...Waan gaarnay ujeedooyinka aan lahayn, ayuu tilmaamay madaxwaynaha Koonfur Africa Jacob ZUma...Kuwa horay shakiga u qabay maanta wax bay aamineen, ayaa laga hayaa Danny Jordaan sarkaalka madaxa u ah guddiga fulinta ee koobka adduunka.
Hadda, iyadoo uu tartan kale foodda nagu soo hayo, sidee cayaaruhu u horumareen gudaha Dalka Qaanso-roobaadka’ sideed iyo labaatan bilood kadib markii captain-ka kooxda Spain Iker Casillas uu kor u qaaday koobka adduunka xilli habeen ah oo cirku mugdi yahay magaalada Johannesburg?
Waxaanu cayaaraynaa nooc cayaareed kii hore ka wanaagsan. Waxaan leenahay mid ka mid ahgaroomada kubadda cagta kuwa ugu wanaagsan balse waxay qaadanaysaa ilaa afar sano in aan soo saarno tas-hiilaadka cusub ee loo baahan yahay, ayuu yiri Cavin Johnson, Tababaraha guud ee kooxda kubadda cagta heerka koowaad ee xiddigaha Platium, oo ka mid ah kooxaha ka faa’iidaysnaya garoomo cusub oo ay ku tababartaan meel wax yar ka baxsan magaalada Rustenburg. Johnson waa ninka lagu ammaanay in uu soo saaray oo uu horumariyay cayaaryahanka xirfadda sare leh ee qadka dhexe hadda uga cayaara kooxda Everton Steven Pienaar oo ka baxay Akadeemiyadda qaranka, waxaa uu hubaa in ay jiraan dhowr kale oo ah xiddigo caalami ah oo sugaya in magacoodu kor u soo kaco iyo natiijada kooxda qaranka.
Koonfur Africa mar walba xirfad ayay lahayd, waxaa laga hadlaa Brazil, Nigeria, Talyaaniga, in mar walba ay ku wanaagsan yihiin kubadda cagta oo hibo u leeyihii, waa sida iyo goorta aad hesho cayaartoyga iyo nooca barnaamijka la marsiiyo. Cayaaryahanada Koonfur Africa lafaha ayay uga jirtaa in ay la mid yihiin kooxda Barselona iyadoo aad u da’ yar. Dhibaatadu waxay tahay sida loo hago, loo horumariyo iyo sida koox walba ay cayaartoydoodu isku daydo in ay noqdaan cayaartoy la mid ah cayaartoyda kooxda Barcelona. Ayuu yiri Cavin Johnson
Roger Palmgren, waa madaxa tababarka kooxda AmaZulu, wuxuuna ku raacsan yahay in tayada hibada dabiiciga ah, iyadoo hadda howsha adag ee taalla ay tahay sidii loo tababari lahaa. Waa in aad aasaaska ka soo bilowdaa kubadda cagta, istaraatiijiyad weerar iyo difaac ah, farsamooyin aasaasi ah, oo hadda naga maqan. Waa in aan xoogga saarnaa aasaaska oo aan horumarinaa tababarka si aan u caawinno dhalinyarada.